ဆုံးမသြ၀ါဒများ | မေတ္တာရိပ်
Category Archives: ဆုံးမသြ၀ါဒများ
(www.infinitydhamma.com) လူတိုင်းလူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မိတ်ဆွေကောင်း ဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။ တရားအားထုတ်လာပြီး သတိ၊ သမာဓိ၊ ဥာဏ်ပညာ ရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာ အနားမှာ ဘယ်သူမှမရှိပေမယ့် အဖော်မဲ့လို့ အားငယ်တဲ့စိတ်မျိုး မဖြစ်ဘူး။ အဖော်ကို အပြင်မှာ မရှာတော့ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်တဲ့စိတ်ဟာ ကိုယ့်အဖော်ဖြစ်နေတယ်။ သတိဟာ ကိုယ့်အဖော်ဖြစ်နေတယ်။ ငါ့မှာ အဖော်မရှိပါလားဆိုပြီး အားမငယ်ဘူး။ မကြောက်ဘူး။ နောက်ဆုံးအချိန်မှာ သတိပဠာန် အဖော်နဲ့ပဲ လက်တွဲပြီးတော့ ဘ၀သံသရာခရီးကို သွားရမှာပဲ။ တစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ငါဟာ ငါနဲ့အတူတူရှိနေအောင် ကြိုးစားပါ။ ငါနဲ့ ငါပဲ … Continue reading →
“ရွှေဥမင်ဆရာတော်ကြီး၏ သင်္ကြန်တရား” •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ကူးပြောင်းတာကို ‘သင်္ကြန်’ ခေါ်တာ။ ‘သင်္ကန္တ’ ပေါ့။ သင်္ကန္တ သဒ္ဒါကို ဗမာက ‘သင်္ကြန်’လို့ သုံးလိုက်တာ။ အများ နားလည်တာ။ ကလေးတွေကတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာ ရေပက်တာလို့ သူတို့ နားလည်တယ်။ သင်္ကြန်အစစ်ကတော့ ကူးပြောင်းတာ။ နှစ်ဟောင်းကနေ နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတာ။ ခန္ဓာသင်္ကြန်နှင့် အတွင်းသန့်ရှင်းရေး လူကလည်း ရုပ်ဟောင်းတွေ ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ ရုပ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတာ တဲ့။ ရုပ်ဟောင်းကနေ ရုပ်သစ် ကူးပြောင်းတယ် ဆိုပေမယ့် ခု ဒီမှာကတော့ … Continue reading →
You have one and only one central need in your life to become the best that you can to realise the best of your potential. သင့်ဘ၀မှာ အဓိကအကျဆုံး အခြေခံအကျဆုံး အချက်အခြာအကျဆုံး လိုအပ်ချက်တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။. “ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးဖြစ်လာဖို့။ ကိုယ့်မှာအရည်အချင်းအများကြီးရှိတဲ့ထဲက အကောင်းဆုံးအရည်အချင်းကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့။” အဲဒါဟာ သင့်ဘ၀မှာ တစ်ခုတည်းသော အချက်အချာအကျဆုံး အဓိကအကျဆုံး … Continue reading →
Posted on March 25, 2013	by mettayate
လူဟာ အသိဉာဏ်ကို လိုလားတဲ့သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်။ သူ့ဘ၀ဟာ ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။ လူဟာ သိချင်တတ်ချင်စိတ် ရှိတယ်။ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်လည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီ သိချင်တတ်ချင်စိတ် လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် မပျောက်ကင်းအောင် ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲလိုတယ်။ အမှန်ကိုပြောရမယ့်တာဝန် ရှိတယ် ဘယ်လိုအမှန်တရားဖြစ်ဖြစ် ဘယ်သူကပြောပြော ဘာအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တာပြောပြော အမှန်တရားမှန်သမျှ တန်ဘိုးရှိတယ်။ အမှန်တရားကို တန်ဘိုးထားရမယ်။ လောကမှာ အမှားတစ်ခုကို အမှားလို့သိပြီး အသိအမြင်အမှန်ကို တွေ့ပြီးတော့ ပြောင်းလဲသွားတာဟာ လူသားတစ်ရပ်လုံးရဲ့တိုးတက်မှုပါပဲ။ အမှန်ဘက်ကိုရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း လူဟာ အသိဉာဏ်ကြောင့် လွတ်လပ်မှုတစ်မျိုး ရသွားတယ်။ ဒုက္ခသက်သာသွားတယ်။ … Continue reading →